Wafdigii Kenya oo toos uga dagay Kismaayo & DF Soomaaliya oo jawaab laga sugayo.
KISMAYO(P-TIMES) – Duulimaad diyaaradeed oo toos uga soo duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka dagay magaalada Kismaayo ee Soomaaliya, saacado uun markii ay dawladdu mamnuucday in diyaarad ka timi dal kale aysan toos uga dagi karin magaaladaas.
Wafdi kasocda dawladda Kenya oo ay ku jiraan Taliyayaasha ciidamada Kenya oo dhan, gaar ahaana Sirdoonka & Milateriga ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo, wuxuuna yahay doorkoodu sidii ay uga qeybgali lahaayeen caleema-saarka Madaxweynaha Jubbaland.
Kenya ayaa ciidamo badan ay ka joogaan gobalada Jubbooyinka, kuwaas oo qeyb ka ah howlgalka Midowga AFrika ee AMISOM, waxaana dad badan ay eegayaan ficilada dawladda Soomaaliya ay qaadi doonto.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in ay arrintan aad uga carootay Xukuumadda Faderaalka oo soo saari doonta war deg deg ah oo ku saabsan talaabada kenya ku dhaqaaqday.
Labo maalin kahor wasaaradda Arrimaha dibada Soomaaliya, waxay dhambaal dacwo ah u dirtay Xukuumadda Nairobi oo ay sheegtay duulimaad ay leedahay uu toos uga dagayo Kismaayo, taasna ay dhaawacayso xariirka labada dhinac.
Isla xalay ayay sheegtay dawladda Faderaalka in ay waajib tahay in duulimaadyada ka duulaya iyo kuwa ka dagaya Kismaayaba ay soo maraan Muqdisho, balse go`aankaas ayaa u muuqda mid jabay oo aan meelmar noqonin.
XOG: DF Soomaaliya oo qaadanaysa qaraar culus oo ka dhan ah Kenya, Haddii Diyaarad tagto Kismaayo.